Rohde SR9009 vovoka (1379686-30-2) mpamokatra sy mpamatsy - Factory
SKU: 1379686-30-2 Sokajy: Serasera Sarmana
Raw SR9009 voly (1379686-30-2) video
Vola SR9009 roat (1379686-30-2) Description
SR-9009 dia agonista REV-ERB. Ny SR-9011 dia naseho fa ny fahafatesana sela dia voan'ny kanseran'ny sela ary ny cellules senilezan'ny oncogene, anisan'izany ny melanocytic naevi, ary tsy misy fiantraikany amin'ny fahazoana zana-trondro na teboka tsotra.
Naseho ny fampiakarana fiaretana, hampihenana ny ahiahy, ary hampihenana ny kolesterola, ny lanjany, ary ny fanaintainana amin'ny totozy. Ireo vokatra ireo, raha voaporofo ao amin'ny olombelona, ​​dia mamerina indray ny fampiasana ny vokatra mahasoa ao amin'ny vatantsika ary manatsara ny fahasalamantsika. Ny tsimok'aretin'ny SR9009 matavy dia mbola tsy fantatra hatramin'izao. Vakio ny mianatra bebe kokoa momba ny vovobony Raw SR9009.
Row SR9009 vovoka (1379686-30-2) Specifications
Product Name Row SR9009 vovoka
Anarana simika 1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 3 - ((((4-chlorophenyl) methyl) ((5-nitro-2-thienyl) methyl) amino) methyl) - ethyl ester
molekiolan'ny Formula C20H24ClN3O4S
molekiolan'ny Wvalo 437.939 g / mol
Color Vovoka tsy fotsy
Solubility Fahamendrehan'ny rano: 0.00162 mg / mL
Row SR9009 vovoka Application Mampitombo ny fiaretana, mampihena ny ahiahy, ary mihena ny kolesterola, ny lanjany, ary ny fanaintainana amin'ny totozy.
Rojo roitso SR9009 vovoka (1379686-30-2) Description
Ny firaisana SR9009 dia tsy an'ny fianakaviana SARMs. Tena mahaliana tokoa izany, avelao aho hanazava.
Ny vatan'olombelona dia miasa arakaraka ny rhythm cirkadia. Izany rehetra dia mitranga ao anatin'ny varavarankely 24 ora iray. Ny zavatra mahaliana dia ny rafitra fehezanteny iray dia tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny rhythm cirkadia. Izany dia manara-maso ny fomba amam-panao ny fototarazo.
Ohatra, rehefa atonta ny CLOC sy BMAL1 dia manosika ny PER sy CRY. I PER sy CRY kosa dia manidy ny MBAL1 sy CLOCK hamerenana ny tsingerin'ny 2 ora.
BMAL1 dia miala amin'ny proteina roa fantatra amin'ny hoe REV-ERBs. Izy ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fampitomboana ny famantaranandro ao amin'ny vatany. Ireo REV-ERB ireo dia nateraky ny vondrona heme izay misy vovoka kely misy vy. Azo tratrarina ao amin'ny vatana daholo izany rehetra izany. Tonga amin'ny endrika isan-karazany izy ireo, toy ny sela mena.
Ny vovonan'ny SR9009 dia fantatra amin'ny fahafahany manatsara ny asan'ny REV-ERBs ary manana fitiavan-tsoa ho azy.
Row SR9009 vovoka (1379686-30-2) Mechanism of Action
Noho ny fahaizan'izy ireo mahakasika ny REV-ERBA (NR1D1, NR1D2) ao amin'ny vatana, ny poezia SR9009 dia mampiseho tombony ara-pahasalamana marobe. Miorina amin'ny fikarohana natao tamin'ny totozy, ny REV-ERB dia manosika ny asan'ny rhythm cadres amin'ny alàlan'ny fanavakavahana BMAL1 mba hanovana ny modely torimaso sy ny asa atao amin'ny ankapobeny.
Ankoatra izay, nasehon'ny REV-ERB ihany koa ny fiantraikany amin'ny lafiny maro amin'ny famokarana angovo.
Ity angamba dia satria ny REV-ERB dia avy amin'ny aty, ny hozatra ary ny tavy:
aty: Ny gn 900 izay fehezin'ny rhythm mity ny sikne, dia mety ho voan'ny REV-ERB ny 90%. Raha vao manomboka miasa izy io dia mamoaka ny fototarazon'ny glucose amin'ny famoahana ny tsimok'aretina insuline. Mandritra izany fotoana izany dia mampihena ny valim-panafaka entin'ny vatana rehefa mihetsika ny famoronana sela vaovao.
Ny muscle: ny REV-ERB dia manatsara ny fiasan'ny mitochondria rehefa mihena ny fahasimbana mitochondria. Ity dingana ity dia manatsara ny fiterahana matavy.
Zahin'ny Fat: Ny REV-ERB koa dia afaka manala ny fototarazon'ny voankazo, izay mampihena ny famokarana triglycerides indray.
Ny fandalinana biby sy cellule izay natao tao amin'ny SR9009 dia maneho fa:
▪ Mampihena ny fihinanana oksizenina izany
▪ Mampihena ny famokarana sela vaovao ao amin'ny atiny
▪ Mihena ny famokarana asidra sy ny famokarana kolesterola
▪ Misy ny isan'ny mitochondria ao amin'ny hozany
▪ Ny gripa dia mampiasa faran'izay haizin'ny glucose sy ny asidra
▪ Tsy ampy ny voankazo voatahiry ao amin'ny hozatra
soa amin'ny Rohda SR9009 Rohina (1379686-30-2)
◆ Mihen-danja ny kolesterola
◆ Hampitombo ny fiaretana
◆ Manimba ny voka-dratsiny
◆ Arovana amin'ny aretin'ny fo
◆ manome hery anao
◆ Manampy amin'ny fanahiana
◆ Manimba ny fahasimban'ny tazo (fibre)
Vovonam-bolan'ny SR9009 Recommended (1379686-30-2) Dosage
Araka ny fijerena bodyguide amin'ny aterineto, tokony handray tsara azy amin'ny dosage 10 amin'ny 40 mg 3 amin'ny 4 isan'andro ny olona.
Side effects amin'ny Rohda SR9009 Rohina (1379686-30-2)
Misy ny vokatry ny SR9009 amin'izao fotoana izao. Ny vokatry ny fikarohana momba ny fikarohana dia tsy manondro ny fisian'ny tosi-dran'ny aretina, fa ny sasany kosa milaza ny tsy fahitan-tory. Tsy manelingelina ny hormonina voajanahary ao amin'ny vatanao izany, ka tsy hisy fanafintohinana intsony.
Midika izany fa tsy mila PCT ianao tahaka ny MK677 sy Cardarine.
1 famerenana for Vola SR9009 roat (1379686-30-2)
Nahitana vovony SR9009 mba hitsapana, ny vokatra azo avy amin'ny test dia tena avo lenta sy fahamendrehana!